Inona ny atao hoe Analytics? Analytics Technologies izay mitondra fanapahan-kevitra momba ny varotra
Inona ny atao hoe Analytics? Lisitry ny teknolojia an-tserasera momba ny marketing
Alatsinainy, Jolay 7, 2014 Alahady Oktobra 19, 2014 Douglas Karr
Indraindray isika dia mila miverina amin'ny fotony ary mieritreritra momba ireo teknolojia ireo sy ny fomba hanampian'izy ireo anay. Ny Analytics amin'ny ambaratonga ifotony indrindra dia ny fampahalalana azo avy amin'ny famakafakana ny angon-drakitra. Efa niresaka izahay analytics terminology an-taonany maro izao fa indraindray tsara ny miverina amin'ny fototra.
Famaritana ny Marketing Analytics
Marketing Analytics dia ahitana ny fizotrany sy ny teknolojia ahafahan'ny mpivarotra manombatombana ny fahombiazan'ny hetsika ara-barotra amin'ny alàlan'ny fandrefesana ny zava-bita (oh: ny fanaovana bilaogy mifanohitra amin'ny haino aman-jery sosialy sy ny fifandraisana amin'ny fantsona) amin'ny alàlan'ny fandrefesana metrim-pandraharahana lehibe, toy ny ROI, ny marketing marketing ary ny fahombiazan'ny marketing amin'ny ankapobeny. Raha lazaina amin'ny teny hafa, dia milaza aminao ny fomba tena fampandehanana ny programa marketing-nao. tamin'ny alalan'ny SAS
Inona ny atao hoe Analytics - Lahatsary iray avy amin'ny IBM
Raha ny resaka marketing an-tserasera, Web Analytics sehatra no rafitra izay manangona, manangona ary manao tatitra momba ny asan'ireo mpitsidika ny tranokalanay na ny fifandraisan'ny media sosialy. Misy ny subset an'ny Analytics tokony ho fantatry ny mpivarotra sy hampiasaina indraindray:
Analytics momba ny fitondran-tena - ny làlana izay alehan'ny mpitsidika sy ny fomba fifandraisan'izy ireo amin'ny pejy tsirairay dia angon-drakitra fitsikerana hahafantarana ny fomba hanatsarana ny tranonkalanao ho fampiroboroboana ny fifamatorana sy ny fiovam-po. Betsaka ny olona no mamorona tranonkala mahafinaritra fotsiny ary manadino fa vavahady fanaovana raharaham-barotra izy io. Misy siansa sy traikefa azo ampiasaina iray taonina azo ampiharina hampitomboana ny sandan'ny tranokalanao amin'ny orinasanao.
Business Intelligence - na BI Analytics afovoaho ny lafiny rehetra amin'ny zava-bitan'ny fikambanananao, manomboka amin'ny varotra ka hatramin'ny asa ary ny kaonty, ho an'ny mpitarika zokiolona hanara-maso ny fihetsiky ny orinasa BI dia ivon'ny fanaraha-maso sy fandrindrana ny zava-bitan'ny fikambanana lehibe, lehibe ary orinasa.
Analytics amin'ny fiovam-po - ny fiovam-po amin'ny tranokala dia hetsika misy lanja. Ny tena miharihary dia ny fividianana tranokala ecommerce. Na izany aza, raha mampiroborobo serivisy ny tranokalanao, ny fiovam-po dia mety ho isan'ny mpitsidika izay misoratra anarana amin'ny fizahan-toetra maimaimpoana, demo, fampidinana, webinar na hetsika hafa izay naseho fa manome lanja. fiovam-po Analytics matetika mampiditra fanandramana singa mba hahafahanao manatsara ny tranokala hanovana mpitsidika bebe kokoa ho mpanjifa.
Analytics momba ny fitsikilovana ho an'ny mpanjifa - Orinasa maro no tsy manara-maso mavitrika na tena tian'izy ireo ny mpanjifany na inona ny sakana amin'ny fifampiraharahana tonga lafatra. Ny rafitra mamela ny valintenin'ny mpanjifa amin'ny alàlan'ny fantsom-piarahamonina, ny fanadihadiana ary ireo teboka fanangonana angona hafa dia afaka manome fikarohana sarobidy momba ny fahitana ny orinasanao sy ny zavatra azonao atao hanatsarana azy.
Analytics amin'ny androm-piainan'ny mpanjifa - Ny fahatakarana ny ambaratongan'ny mpanjifanao dia tena ilaina amin'ny fampitomboana ny fihazonana ny mpanjifa, ny fampiakarana ny sandan'ny mpanjifa, ary avy eo ny fandikana ny ho avy amin'ny fanoherana mahomby indrindra anananao. Vitsy ny sehatra mandrefy ny dingana ary koa ireo mpanohana ny automatisation marketing ao Miorina amin'ny Interactive, aza hadino ny mahazo demo amin'ny rafitr'izy ireo.
Analytics amin'ny fandefasana hafatra - automatisation marketing, mailaka, fitaterana inbox, SMS, telefaona ary rafitra fandefasan-kafatra hafa manolotra Analytics hanomezana anao hetsika isaky ny fampielezan-kevitra, hetsika ataon'ny mpanjifa ary matetika ampifandraisina amin'ny iray hafa Analytics rafitra hanatsarana ny fandefasan-kafatrao sy ny fanatanterahana ny fampielezan-kevitra.
Analytics mialoha - mifototra amin'ny zava-bita taloha tamin'ny tranokalanao, ireo sehatra ireo dia maminavina mialoha ny ho fihetsiky ny mpitsidika amin'ny ho avy. vinavina Analytics Matetika ny sehatra dia manolotra modely ahafahanao manamboatra fanitsiana sy maminavina ny vokatr'ireo fanovana ireo eo amin'ny zava-bitan'ny tranokalanao. Ohatra, ahoana raha manapaka ny antsasaky ny karamanao isaky ny kitiho ianao ary mampitombo ny teti-bolanao?
Real-Time Analytics - manomeza hevitra momba ny hetsika sy fitondran-tenan'ireo mpitsidika eo amin'ny tranokalanao amin'izao fotoana izao. Amin'ny fotoana katroka Analytics azo ampidirina hanovana ny fihetsiky ny mpitsidika, hampitombo ny mety ho fiovam-po, ary hanome fahafantarana ny ora-hamaly isa-minitra ny tranokalanao.
Sales Analytics - Sehatra teknolojia mitombo ny fahazoana mivarotra. Kitapo fivarotana toa ny mpanohana anay ao Salesvue ampidiro mivantana amin'ny Salesforce CRM ary omeo ny fitantanana ny varotra amin'ny antsipiriany rehetra ilain'izy ireo ny mahita sy maminavina ny fahombiazan'ny varotra. Ary ho an'ny mpivarotra, ireo rafitra ireo dia manampy azy ireo hampitombo ny vokatra, hanatsara ny toerana misy azy ary hanidy fifampiraharahana lehibe kokoa.
Search Analytics - Ny backlinks dia fenitra volamena amin'ny laharana amin'ny Internet ary ny laharana dia mitarika fifamoivoizana sy fiovam-po. Vokatr'izany, fitaovana manampy anao hanara-maso ny motera fikarohana, mpifaninana ary ny fomba filaharany ny atiny afaka manampy anao hisarika mpitsidika vaovao ary hanangana paikady atiny mitondra fiara. Fikarohana karama Analytics manome anao fahombiazana amin'ny teny lakile sy mari-pandrefesana mba hahafahanao mampihena ny vidinao isaky ny mitarika sy mampitombo ny varotrao.
Fanadihadiana ara-tsosialy - rehefa nivoatra ny Internet, ny isam-batan'olona sy ny orinasa dia nanangana fahefana izay ahazoana mpanaraka mitombo. Social Analytics afaka mandrefy izany fahefana izany, manara-maso ny laharam-piaraha-monina misy anao, manampy anao hahatakatra ny antony hanarahan'ny olona anao sy ny lohahevitra ifandraisany aminao indrindra. Ny fanampiana anao hamboly fanarahana ara-tsosialy sy fahefana matetika dia mitarika amin'ny fitomboan'ny fahatokisana eo amin'ny mpihaino na vondrom-piarahamonina misy anao - izay azo ampiasaina hanako ny fampiroboroboana anao na handroahana fiovam-po mivantana mihitsy aza.
Mazava ho azy, ireo rafitra rehetra ireo dia afaka manome be loatra ny fampahalalana ary matetika mitarika mankany paralysisa famakafakana. Mahafinaritra ny mahita Analytics sehatra manokatra ny API-dry zareo ary miditra amina antoko fahatelo hafa hanatsarana ho azy ny traikefa ho an'ny mpanjifa. Ny fitsikerana lehibe indrindra nataoko Analytics Ny sehatra dia ny fanangonana sy ny fitaterana angon-drakitra, saingy mahalana vao manao tolo-kevitra. Ireo sehatra fitiliana fiovam-po dia manao an'io tsara - Enga anie ka hisy ny sisa! Ohatra, tsy azoko ny antony Analytics Ireo sehatra dia tsy manome fahitana momba ny paikadin'ny atiny ary manome anao tolo-kevitra momba izay tokony hosoratanao.
Tags: fanadihadiana momba ny fitondran-tenaraharaham-barotra ny faharanitan-tsainaanalytics fanovanafamaritana ny analyticsfamaritana ny analytics momba ny marketingfamaritanamailaka analyticsGoogle Analyticsny fomba fiasan'ny analyticsahoana ny fomba fiasanyIBManalytics momba ny varotrafandefasana hafatraomniturevinavina Analyticsanalytics amin'ny fotoana tena izyanalytics an-tranonkalafanadihadiana ara-tsosialyfanadihadiana amin'ny media sosialyMalagasy Analyticsfamakafakana tranonkalawebtrendsinona ny atao hoe analytics
Ampitomboy ny vintana misy ny votoatinao amin'ireto taktika 5 ireto